Sung Dong-il – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Miss & Mrs. Cops (2019) Unicode Mi-yeong က ရဲတပျဖှဲ့ဝငျဟောငျးတဈယောကျဖွဈပွီး လကျထပျပွီးနောကျမှာ ပွညျသူ့ဝနျဆောငျမှုလုပျငနျးစငျတာမှာ အလုပျပွနျဝငျခဲ့တယျ။ သူ့ခယျမဖွဈတဲ့ Ji-hye ကတော့ ဌာနအတူတူမှာလုပျကိုငျနပွေီး လူသဈလေးတဈယောကျပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့တှေ အမြိူးသမီးငယျလေးတှေ သတျသမှေုတှေ၊ အမြိူးသားတှကေ မူးယဈဆေးတှေ ကြှေးပွီး လိငျအကွမျးမှုတှေ၊ နောကျပွီး အကွမျးဖကျတာတှကေို video ရိုကျပွီး အငျတာနကျပျေါတငျတာတှေ စတဲ့ အမှုတှေ မွငျ့တကျလာတာကို ဖွရှေငျးဖို့ကွိုးစားကွတယျ။ဒါပမေဲ့ ရဲဌာနဘကျက မကူညီ မထောကျပံ့ပဲ လဈြလြူရှုထားခဲ့ကွတယျ။ သူတို့နှဈယောကျ ဘယျလိုဖွရှေငျးကွမယျဆိုတာ ကွညျ့ရှုရမဲ့ Crime Comedy ကားလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ အဓိက သရုပျဆောငျအနနေဲ့ မငျးသမီး Ra Mi-ran နဲ့ Lee Sung-kyung တို့ပါဝငျထားပွီး MyDramaList မှာ rating 8.1/10 ရရှိထားသျောလညျး IMDB မှာတော့ rating 5.5/10 သာရရှိထားပါတယျ။ Credit Review ဒီဇာတျကားကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Khant Linn ...
Midnight Runners (2017) Unicode Midnight Runners ဟာ သွဂုတျလ9ရကျမှာရုံတငျခဲ့ပွီး ကိုရီးယား လူငယျမငျးသားတှဖွေဈတဲ့ Park Seo-joon, Kang Ha-neul တို့ အဓိက သရုပျဆောငျထားတဲ့ ဟာသ-အကျရှငျ အသားပေး ရုပျရှငျပါ။ ဒါရိုကျတာအဖွဈ Kim Joo-hwan က တာဝနျယူရိုကျကူးပါတယျ။ ရုပျရှငျမှာတော့ Park Seo-joon က Mr.Action စရိုကျက ပါဝငျထားပွီး ခပျသှကျသှကျနဲ့ သှေးဆူလှယျကာ ကိစ်စတခုဖွဈရငျ လုပျခငျြရာလုပျထညျ့လိုကျပွီးမှ စဉျးစားဆငျခွငျမှုကို နောကျမှလုပျသူဖွဈတယျ။ Kang Ha-neul ကတော့ Park Seo-joon နဲ့ ဆနျ့ကငျြဘကျဖွဈပွီး ပုံစံခပျတုံးတုံးနဲ့ဖွဈကာ လကျတှလေု့ပျရမှာထကျ တှဝေစေဉျးစားနတေတျတဲ့ စာကွမျးပိုးလေး Mr.Bookworm အဖွဈ ပါဝငျထားပါတယျ။ သူတို့နှဈဦးက ကိုရီးယားရဲတက်ကသိုလျကို တကျရောကျကွမယျ့ ကြောငျးသားသဈတှပေါ။ ရဲတက်ကသိုလျမှာမှာ စတငျတှခေဲ့ကွပွီး အခဈြဆုံးသူငယျခငျြးတှလေညျး မဟုတျကွဘူး။ ဒါပမေယျ့ လူပြိုတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုငျး ဖှနျကွောငျဖို့ကိစ်စ ...
IMDB: 7.1/10 3,066 votes
Along with the Gods: The Last 49 Days (2018) ဒီဇာတ်​ကား​လေးက ငရဲကြီးရှစ်​ထပ်​အ​ကြောင်းကို ရိုက်​ပြထားတဲ့ ကိုရီးယားဇာတ်​ကား​လေးဖြစ်​ပါတယ်​ အပြစ်​မျိုးစုံကျူးလွန်​ခဲ့ကြပြီး ​နောက်​ထပ်​လူပြန်​ဖြစ်​ဖို့အတွက်​ နှစ်​​ပေါင်း​ထောင်​ချီ အပြစ်​ကို​ပေးဆပ်​​နေကြရတဲ့ ဘုရားရဲ့ အ​စောင့်​အ​ရှောက်​​တွေ အ​ကြောင်းကိုရိုက်​ပြထားတာဖြစ်​ပါတယ်​ ဘုရင်​ ရွန်​မ်​မရာ ဟာ ​စောင့်​​ရှောက်​သူ ဂန်​လင်းကို သူ့ရဲ့ အပြစ်​ကို​ဆေး​ကြောဖို့အတွက်​ နှစ်​​ပေါင်း​ထောင်​ချီ စိတ်​ဒဏ်​ရာနဲ့​နေ​စေခဲ့တာဖြစ်​ပါတယ်​ သူ့အနားမှာလည်း ဟယ်​ဝန်​မက်​ နဲ့ ​ဒေါ့ချွန်းဆိုတဲ့ သူနှစ်​​ယောက်​ရှိတယ်​ ဂန်​လင်းက သူ့ရဲ့အပြစ်​ကို​ဆေး​ကြောဖ်ို့ သူ​နောက်​တစ်​ခါလူပြန်​ဖြစ်​ဖို့ ဝိဥာဉ်​​၄၉ခုကို ကယ်​တင်​ရမှာဖြစ်​ပါတယ်​ ကင်​ဆူဟွန်း ဆိုတဲ့ မတရားသတ်​ခံခဲ့ရတဲ့ သူရဲ့အမှုကို တရားမှုရဖို့ အတွက် သူ့ရဲ့ ရပိုင်​ခွင့်​​တွေကို​လောင်းပြီး သူသတ်​မှတ်​ချိန်​အတွင်း အမှုကို​ဖော်​ရမှာဖြစ်​ပါတယ်​ သူ့ရဲ့​ဘေးနားကနှစ်​​​ယောက်​ကိုကျ​တော့ လူ့ပြည်​ကို သက်​တမ်း​စေ့​နေတဲ့ အဖိုးကြီးကို အ​ခေါ်လွှတ်​လိုက်​တာ ပြန်​မလာ​တော့တဲ့ နတ်​ဘုရား ​ဆောင်​ဂျူကို ​ရှင်းပြီး အဖိုးကြီးကိုပြန်​​ခေါ်ဖို့ လွှတ်​ပြီး တာဝန်​ခွဲခဲ့ကြပါတယ်​ ဒီလိုနဲ့ ကိုယ်​စီ တာဝန်​​တွေ​ကျေကြမလား ​နောက်​ထပ်​ပြန်​​မွေးဖွားခွင့်​​တွေရကြမလားဆိုတာကို​တော့ ဒီဇာတ်​ကားမှာ​တွေ့မြင်​ရမှာပါ လူ​တွေ​နေ့တိုင်း စိတ်​ပင်​ပန်း ဆင်းရဲ​နေရတဲ့ ...
The Great Battle (2018) ၂၀၁၈ ထွက် ကိုရီးယားရာဇဝင်ကားကောင်းလေးတစ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဦးမယ်နော် ဇာတ်ကားနာမည်လေးက The Great Battle ပါမင်းကြီးဂျူမုံတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဂိုဂုလျောပြည်ကို တရုတ်ထန်ဘုရင် ကျူးကျော်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို စစ်တိုက်ပုံမျိုးစုံ ဝေဝေဆာဆာနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရာဇဝင်ကားကောင်းလေးပါဂိုဂုလျောက စစ်သူကြီးယွန်းဟာ အန်စီခံတပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ယန်မန်ချွန်ရဲ့ အမိန့်မနာခံမှုကို အပြစ်ပေးဖို့အတွက် သူ့ဆီကို သူလျှိုတွေ စေလွှတ်ပေါင်း မနည်းပါဘူးအန်စီမြို့သား ဆာမူကို စေလွှတ်လိုက်ချိန်မှာတော့ ဆာမူဟာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးယန်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ပီသမှုတွေကို မြင်တွေ့ရပြီး လုပ်ကြံမှု မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး တိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကို ရှုံးပွဲမရှိ တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ တရုတ်ထန်စစ်တပ်ဟာ အန်စီခံတပ်ကို တိုက်ဖို့ လာတဲ့အခါ ယန်မန်ချွန်ရဲ့ ပါးနပ်မှု လက်ရုံးရည် နှလုံးရည်ပြည့်ဝမှုတွေကြောင့် လွယ်လွယ်နဲ့ မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး၃ လလောက်တိုက်ပွဲဝင်ရတာကို တိုက်ခန်းခိုက်ခန်း မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ ရိုက်ကူးထားလို့ ကြည့်ရတန်တဲ့ ရာဇဝင်ကားကောင်းတစ်ကားပါဒီ့အပြင် အချစ် အလွမ်း နဲ့ တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်တွေကိုပါ ပေါ်လွင်အောင် ရိုက်ပြထားလို့ ရသမျိုးစုံကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ...
IMDB: 7.0/10 983 votes